Pacific Medical Industries Ltd (PMI) အနောက်တိုင်းဆေးဝါးစက်ရုံ၏ Antiviral generic medicine FAVIPAC (Favipiravir 200mg) tablet (20 tablets/box ) အား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ယခုအခါ AA Medical Products Ltd မှ လိုအပ်သော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ Covid ကုသရေး center၊ ဆရာဝန်ကြီးများထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိစေရန် နှင့် ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုမရှိစေရန် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လူနာများအတွက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
💊FAVIPAC (Favipiravir 200mg) သည် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက် ၊ ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းစာဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်မည့် Prescription Only Medicine (POM) ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားသည့် ဆေးဝါးအချိန်အဆ၊ ညွှန်ကြားသည့်ရက်အပိုင်းအခြားဖြင့်သာ သောက်သုံးရမည့် Anti-viral ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဆေးအချိန်အဆမှာလည်း လူနာ၏ ရောဂါအနုအရင့်နှင့် ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ သောက်သုံးရမည့်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
Favipac ဆေးမှာယူလိုပါက Viber ဖုန်းနံပါတ် 📞09-445023342 📞09-445023362 📞09-445023372 📞09-445023336 📞09-455121895 များ သို့ ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းစာ ပို့ပြီး အဆိုပါ Viber နံပါတ်များမှ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်သည့်အပြင်
✅ရွှေမင်္ဂလာစျေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးဆိုင် အမှတ် တ-၁၆၁ နှင့် တ-၁၆၂ ၊ တတိယထပ် ရှိ AA Medical Products Ltd wholesale ဆိုင် တွင်ဖြစ်စေ ( ဥပုသ်နေ့နှင့် တနင်္ဂနွေပိတ်ပါသည်)
✅ဗိုလ်ချုပ်စျေးသစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးဆိုင်အမှတ် (၄၂၃ ) Junction City ဘေး ၊ မြေညီထပ် ရှိ AA Medical Products Ltd wholesale ဆိုင်တွင်ဖြစ်စေ ( စနေ ၊ တနင်္ဂနွေပိတ်ပါသည်) သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နယ်မှမှာယူလိုသူများအနေဖြင့် ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းဖြင့်အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်
📌Mandalay - 09-259050377, 09-444638808 Address - No 233,Corner of 26th x 82 th Street, Chan Aye Thar Zan ,Mandalay. Ph : 02-72805,30040,30041,31291, 02-30723,30724,30725
📌Monywa - 09-400407394 Address - No. 5/6, Thit Sar Street, Phone Soe Ward, Monywa Ph : 071-26553, 26554
📌Nay Pyi Taw - 09-963332660 Address - Za/21, Ziwaka Room, Tha Pyay Kone Market, Zabuthiri Tsp, Naypyitaw. Ph: 067-8108186 - 87
📌Tanggyi - 09-253931662 Address - No.188, Shwe Hinthar Road , Nyaung Shwe Hawkone Ward, Taunggyi Ph: 081-201762,201763
📌Lashio - 09-776874759 Address - No. 20, Hninsi 2nd Street, 1st Ward, Lashio. Ph : 082-2203920
📌Myitkyina- 9-798184320 Address : No. 53, Aung Mingalar Street, Aung Nan Ward, Myitkyina. Ph : 074-21161,20473
📌Magway - 09-790710415 Address : No.B/122, Lanamdaw 1st Street, Sar Se Ward, Magway. Ph : 063-25334,25383,25347,25523
📌Pathein - 09-422482673 Address : No. 716,Sakawar Street, 3rd Ward, Pathein. Ph : 042-23764,23245
📌Pyay -09-423706840 Address - No. 79, Pansodan Street , Shwe Ku Ward, Pyay. Ph : 053-24843
📌Mawlamaying - 09-425268289 Address - No. 14, Yadanar Street, Mayangon Ward, Mawlamying. Ph : 057-27370,27371,25789
📌Myeik - 09-254099039 Address - No. 89, Myat Yar Zar Street, Aye Chan Thar Yar Ward, Myeik. Ph : 059-42935,42813
💊COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် Emergency Use Medicines အဖြစ် Favipiravir 200mg အားဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် အမှန်တကယ်သောက်သုံးရန်လိုအပ်သည့်လူနာများ အတွက် အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။
💊Pacific Medical Industries Ltd (PMI) အနောက်တိုင်းဆေးဝါးစက်ရုံမှလည်း FAVIPAC ဆေးအား ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုမရှိစေရန် နှင့် စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းမရှိစေရန် စီမံ၍ လူနာများအားလုံး လက်လှမ်းမှီသောက်သုံးနိုင်ပြီး ရောဂါဝေဒနာများ သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါကြောင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။